Mooska Miyuu Noqon Karaa Halis Caafimaad! | Xaqiiqonews
Labo saynisyahan oo ka tirsan jaamacadda Beihang University Jian Saotian iyo Liao Jie,ayaa shaaca ka qaaday halis caafimaad oo uu leeyahay khudradda macaan ee mooska inkastoo halistu ay tahay mid aad u yar.
Waxa ay baarayaashan sheegeen in mooska uu ka ka kooban yahay Botaasiyamka caadiga ah kaasi oo aan wax dhib ah laheyn, sidoo kale mooska ayaa ka kooban Botaasiyam-40 oo ah il uu ka soo baxo shucaaca danabeysan kaasi oo dhib u keeni kara caafimaadka, sida ay qortay wakaaladda wararka ee “Novosti”
Sidaasi oo ay tahay kamiyadda maadadan ee mooska ku jirta waa mid aad u yar.
Saynisyahanada waxa ay leeyihiin shucaaca laga heli karo cunitaankii xabad moos ah waxa uu noqonayaa qiyaastii 0.0778 microsieverts oo ah cabirka shucaaca danbeysan.
Sida uu oqraayo Webseetka “Science focus”, dadka waaweyn waxa ay leeyihiin qiyaastii 140 gram oo Botaasiyam ah, 16 Miligram oo ka mid ahna waa Botaasiyam-40, taasi oo qofka ka dhigeysa in uu 280 mar ka shucaac badan yahay xabadka mooska ah.
In aad moos cunto waxa ay 0.4 boqolkiiba kor u qaadeysaa Botaasiyam-40-ka jirkaaga inkastoo arintaasi ay tahay ku meel gaar madaama dheef-shiidka kimikooyinka uu dib u nidaaminaayo jirkeena, waxaana qashin saar ahaan jirka looga saaraya dibadda saacado gudahood.